Politika koa ve ny famoran-jaza e ? | 102 KARA
Politika koa ve ny famoran-jaza e ?
Mba isehosehoana fa manao zavatra ny mpanao politika, dia idirany hatrany amin’ny sehatry ny fanaovana hasoavan-jaza faobe sy an-kalamanjana indray izao no ampanaovany izany.
Mialoha ny fanatanterahana izany aloha dia misy kabary tsara lahatra ataon’izy ireo. Rehefa izany dia roso amin’izay eo amin’ny famoran-jaza.
Manoloana ny hetsika toy izany indrindra anefa no namoahan’ ny Minisiteran »ny fahasalam-bahoaka, fa tsy mety sy tsy azo atao izany. Ny antony dia satria mety ho betsaka ny vovoka manidina ka miteraka mikraoba amin’ilay fery vao, ary hampitondra takaitra ny zaza, na tsy eo ho ho eo aza fa any aoriana any. Tojkony ho diovina tsara koa ny fitaovana rehetra entina hamoran-jaza.
Koa raha misy famoran-jaza atao dia tokony amin’ny toeram-pitsaboana na amin’ny toerana voatokabna ho amin’izany ihany no anaovana azy, fa tsy eny rehetra eny hitadiavana DERA sy LAZA fotsiny, hoy io fanambaran’ny Minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka io.
7 août 2013 - 7 h 35 min Social 893 vues